iCloud horeyba wuxuu noo ogolaanayaa inaan soo ceshano faylasha la tirtiray | Wararka IPhone
Waxaan xasuustaa sanad ka hor markii Telegram uu bilaabay inuu kaco. Marnaba ma ogaan sababta, laakiin waxaan tirtiray illaa laba jeer dhammaan xiriiradayagii isticmaalay dalabka. iCloud ayaa kufiican samaynta keydka daruurta laakiin, hadday had iyo jeer isku dhafan tahay, sidaan ahaa kiiskeyga, markii laga tirtiray iPhone-ka, sidoo kale waa laga tirtiray iCloud, sidaa darteed xiriiriyayaashu way lumeen iyagoon awoodin inay wax badan qabtaan. ku saabsan. Tan iyo markaas, Waxaan keydsaday keydkeyga kumbuyuutarka si aan u soo ceshan karo haddii aan dhibaato la mid ah mar labaad ku qabto.
Marnaba ma fahmin sababta haddii Apple u adeegsado Waqtiga Mashiinka OS X iyo xitaa dukumiintiyada aysan jirin wax hubiya inaanan lumin macluumaad aad muhiim u ah sida xiriiradayada, laakiin nasiib wanaag, Hadda waa suurtagal in la soo celiyo xiriirada, feylasha iyo jadwalka taariikhda laga soo bilaabo iCloud si aanan mar dambe u walwalin (xoogaa adag kadib khibradeyda Telegram) luminta macluumaadkaan darteed.
Suurtagalnimada soo kabashada feylashaan ayaa laga heli karaa icloud.com waana wax aad u fudud in la fuliyo. Si tan loo sameeyo, waa inaan sameynaa waxyaabaha soo socda:
Sidee looga soo ceshaa xogta iCloud.com
Waxaan furaynaa goobaha.
Qeybta bidix ee hoose, gudaha Heer sarewaan doorannay mid ka mid ah saddexda xulasho.
Waxaan doorannaa nooca xogta aan dooneyno inaan ka soo kabanno oo aan ku taabanno Soo celinta.
Ku hoos jira nooc kasta oo dib u soo celin ah waxaan arki doonaa digniino dhowr ah. Xaalada feylasha, ma aragno wax digniin ah maxaa yeelay waxba lama bedelo, mar kale ayaa lagu daro. Markaad soo ceshanayso feyl xiriir, waxay nooga digaysaa taas dhammaan xiriirada jira waxaa lagu beddeli doonaa kuwa taariikhda la xushay iyo, tallaabo xagga amniga ah, gurmad ayaa laga samayn doonaa ajandaha aan wakhtigaas haysanno. Markii aan ka soo kabaneyno jadwalka taariikhda, waxaa nala soo ogeysiiyey in wax la mid ah ay ku dhici doonaan sida ku jirta xiriirada, marka lagu daro tirtiri doonaa dhammaan macluumaadka la wadaago oo dhammaan dhacdooyinka jadwalka ah waa la tirtiri doonaa oo dib loo abuuri doonaa, sidaa darteed martida dhacdada waxay arki doonaan joojinta marka hore kadibna casuumaad cusub.
In kasta oo maalinteedii ay ahayd inaan weydiisto inaan dib u helo xiriiriyahaygii oo aniga aniga tani waxay soo noqotaa waxoogaa xilli dambe ah, oo ka habsaamay weligeyba waana ku faraxsanahay in Apple ay arrintan ka fakartay Waan ku celinayaa, goor dambe, laakiin hadda waan tirtiri karaa faylkeyga aniga oo kaydinaya xiriiriyaashayda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iCloud » iCloud horeyba wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka soo kabano xiriirada la tirtiray iyo noocyada kale ee faylasha